Manao Fefy Olona Manodidina Ny Mpitandro Filaminana Ireo Vehivavy Makedoniana Mba Hitazonana Ny Hetsika Hilamina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2015 7:51 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Français, македонски, Español, English
vehivavy mpanao hetsi-panoherana, manao fefy olona, miaro ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpihantsy, misoroka ny fitomboan'ny herisetra. Sary: Meta.mk, nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Tamin'ny fampisehoana iray nampitolagaga, iray andro fotsiny taorian'ny nandravan'ireo mpitandro ny filaminana tamin-kery ireo mpanao fihetsiketsehana tany Makedonia, tamin'ny basin-drano, fitaovana mamoaka entona mahery ary kibay, nanao fefy olona nanodidina ireo mpitandro filaminana ny vondrona vehivavy nivoaka nanao fihetsiketsehana, mba hiarovana azy ireo amin'ireo mpihantsy mitoraka tavoahangy.
Ireo vehivavy any Skopje, tanàna renivohitr'i Makedonia, dia nandray anjara tamin'ny andro faharoan'ny fihetsiketsehana hitakiana ny rariny taorian'ilay rakipeo niporitsaka, hita ho mampiseho ireo mpiasam-panjakàna ambony miezaka ny hanarona ilay famonoana an'i Martin Neshkovski ny taona 2011, nataon'ny mpitandro filaminana.
Ny 6 May, nandeha teny an-dalamben'i Skopje ireo olona hafa an'arivony maro, ary niparitaka hatrany Bitola sy Prilep ilay hetsika. Tsy namerina ny fampisehoan-kery nataony ny andro talohan'io ny governemanta, ary nilamina araka ny niheverana azy ireo hetsi-panoherana.
Fa tany Skopje kosa taorian'ny ora maromaro, raha niha-nanifinify ireo vahoaka, nisy ireo maromaro tamin'ireo mpandray anjara nampitandrina ny fisian'ireo mpihantsy mihamitombo. Nisy vondrona “mpakafy baolina kitra” nanao saron-doha sy saron-tava nanomboka nitambatambatra ary nanipy zavatra tany amin'ny Parlemanta sy ny tohivakan'ny mpitandro filaminana nanasaraka ilay tranobe amin'ireo vahoaka maro nitsangana na nipetraka teo amin'ny làlana, ahi-maitso ary teo amin'ny kianja akaiky teo.
Nitatitra izao ny masoivohom-baovao META.mk:
Na nisy aza ireo fikasàna maro hanao fihantsiana avy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana miisa dimy ambiny folo, nifarana tamim-pilaminana ilay hetsika fitakiana ny rariny ho an'i Martin Neshkovski, izay raha tokony natao nanoloana ny Governemanta dia natao teo anoloan'ny Antenimiera.
Ny fikasana farany nataon'ny andian'ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanao herisetra dia voasoroky ny vondrom-behivavy mpikatroka mafana fo, izay nitsangana teo anelanelan'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana.
Nijanona nipetraka teo amin'ny ahi-maitso nanoloana ny Antenimiera ary niresaka ireo mpanao hetsi-panoherana am-polony.
Ireo mpandray anjara sasany nitsipona ireo fako sy ireo tavoahangy plastika teny amin'ny ahi-maitso sy ny arabe, saingy nisy ireo sasany, izay na efa natao afaka andehanana amin'izay aza ny arabe, mbola tsy namela ireo fiara handeha ihany.
Niala ny ankamaroan'ireo fiaran'ny hery manokana sy ny mpitandro filaminana.
Tavoahangy vitsivitsy sy atody no voatsipy tany amin'ny tranoben'ny Antenimiera, fa tsy nisy kosa ny mpitandro filaminana na mpanao fihetsiketsehana naratra mafy.
Niantso ireo olon-tsotra hanjohy azy ireo amin'ny fihetsiketsehana am-pilaminana ny ampitso amin'ny 6 ora hariva ireo mpanao fihetsiketsehana, fa mbola tsy nolazaina mazava tsara hoe aiza ny toerana.
Nandefa lahatsary mikasika ilay hetsika ny mpanao gazety Vlado Apostolov (@apostolov80).
Nandritra ny volana maro, nanaporitsaka rakipeo ireo filohan'ny mpanohitra, izay toa manamarina ireo ahiahinà karazana heloka bevava nataon'ireo tompon'andraiki-panjakana ambony, tafiditra ao anatin'izany ny halatra amin'ny fifidianana, fihainoana miafina tsy ara-dalàna ary ny fanafenana ireo andinindininy amin'ny fanadihadiana mikasika ny famonoana an'i Martin Neshkovski, 22 taona.
Nodarohan'ny mpitandro ny filaminana iray ho faty i Neshkovski ny taona 2011, nandritra ny fankalazàna taorian'ny fifidianana. Nahatonga fihetsiketsehana lehibe tamin'izany andro izany ny famonoana azy, ary nosamborina sy nosaziana 14 taona an-tranomaizina ilay mpitandro filaminana.
Araka ny fomba napetraka hatrizay amin'ireo fihetsiketsehana natao hanoherana ny fampiasan-kerin'ireo mpitandro filaminana, nanapaka hevitra ireo mpandray anjara fa hifamory isan'andro amin'ny 6 ora hariva, mandrapahafenon'ireo fangatahan'izy ireo, izay ny fametraham-pialàn'ireo tomponandraikim-panjakana rehetra tafiditra amin'io raharaha io sy ny hiatrehan'izy ireo ny fitsaràna. Ny 6 May, nobahanan'ny mpitandro filaminana ireo làlana manodidina ny tranoben'ny governemanta, izay noeritreretin'ilay mpanao diabe hihaonana, noho izany, nihodina an'io ireo olona maro be ary nandeha nanao ny hetsi-panoherana nanoloana ny Parlemanta. Mpanao fihetsiketsehana am-polony maro no nijanona teo amin'ireo làlana voabahana ireo, nanoro làlana ireo olona vao tonga. Tao ireo nilaza fa nanitsakitsaka ny Andininy faha 21 amin'ny lalàm-panorenan'ny Repoblikan'i Makedonia ny governemanta tamin'ilay fibahanana:
Manana zo ny hifamory am-pilaminana sy haneho hetsi-panoheranaimasom-bahoaka ny olon-tsotra, tsy mila filazàna mialoha na fahazoan-dàlana manokana.
Mandritra ny vanim-potoanan'ny sahotaka na ady ihany no afaka ferana ny fampiharana io zo io.
Raha nahitàna mpandray anjara miisa 5.000 ny hetsi-panoherana ny 5 May 2015, novinavinaina ho nahazo olona miisa indroa na intelo nihoatra an'io ilay faharoa. Namivavina ny isan'ny olona ho 15.000 ny rahalahin'i Martin Neshkovski, izay niteny nanoloana ireo vahoaka.
Hetsi-panoherana milamina, mangataka ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaha famonoana an'i Martin Neshkovski tao Skopje. Sary: Vancho Dzambaski, CC BY-NC-SA.
Nialoha ireo hetsi-panoherana, nampiasa ny tenifototra #протестирам (Manohitra aho!) ireo mpikatroka mafana fo, mba handrindràna ireo olona efa nampitandremana tsy hitondra ankizy, mba hisorohana azy ireo tsy ho voatohintohina raha sendra ka mandidy ny hamerina hampiasa herisetra indray ny governemanta.
Taorian'ny fihetsiketsehana, haingana be ny namantaran'ireo mpampiasa Twitter ilay zatovovavy tompon-kevitra nitarika nanao ilay fefy olona. Namaly avy eo i @Momichet0 niaraka tamin'ny fanazavana:
Tsy ihatsarana ivelantsihy, fa tsapako ho tsara izany aho momba ireo fiderana ahy, kanefa tsy nahatsapa tena ho be herim-po aho tamin'io fotoana io, na hoe mahatsapa ho mahery fo ankehitriny. Tena natahotra be aho.
Ary tsy nitsangana aho satria hoe tiako ireo mpitandro filaminana. Tsy manamarina azy ireo aho ary mieritreritra aho fa manana safidy izy ireo.
Nitsangana aho satria hiteraka olana ireo jiolahim-boton'ny baolina kitra ary hitsoaka avy eo, dia ireo mpanao hetsi-panoherana tsy manan-tsiny no hizaka ny vokany sahala ny tamin'ny omaly ary ho voadaroka eo indray.